Rano ho fitaovana ara-panahy
Fivavahana & Spirituality Fanasitranana ara-nofo
Saintsaino amin'ny rano
Fanavaozana avy amin'ny: Home Enlightenment: Torohevitra mahasoa, tetik'asa mahasalama momba ny tany, noho ny fanorenana trano sy fomba fiaina mahazatra avy amin'i Annie B. Bond
Ny rano no fototry ny vatantsika. Izy io dia ampahany amin'ny cellule sy fibre rehetra ao amintsika; Ny tena maha izy antsika izany. Afaka rano ve ny komonista iombonana izay manenika antsika rehetra (tany, biby, olona ary zavamaniry) miaraka amin'ny iray? Izany no connexion farany? Mahatalanjona sy manetry tena io rano io mitondra hafatra maro be entina, indrindra rehefa heverintsika fa nisy ny rano sy ny karandrefana mitovy ihany, teto an-tany nandritra ny an-tapitrisany taona. Hafatra inona no raisintsika avy amin'ny razantsika rehefa misotro isika? Ary mahagaga ny mieritreritra fa tao anatin'ny 60 taona monja, ny tànan'ny olombelona dia nanala loto be loatra tao anaty rano, ka nahatonga azy tsy handanjalanja. Adidintsika ara-panahy ny mpikarakara ny rano ary tsy manisy ratsy azy intsony.
Ity fisaintsainana sy rano fandroana mahafinaritra ity dia noforonina niaraka tamin'ny fanampiana malala-tsaina, azo tsapain-tanana ary traikefa nataon'i William E. Marks, mpanoratra ny The Holy Order of Water.
Fenoy rano fandroana ny rano iray amin'ny fahatsapana mety ho anao. Asio rano fisotro madio madio eo akaikinao raha toa ka mangetaheta ianao. Azonao atao ny manazava labozia na soja ary manala ny jiro. (Hitako ny fanesorana ny jiro fandroana ho fampivoarana, angamba satria ny jiro artificielle rehetra dia manova ny herin'ny efitrano.)
Alohan'ny hidirana ao anaty dobo feno rano, mangataha rano mba hanadiovana, hanasitrana ary hanadio ny fanaintainana lalina ao anatinao, na ara-batana, ara-tsaina na ara-pihetseham-po. Ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny fangatahana fanasitranana dia tena zava-dehibe. Rehefa mangataka fanasitranana avy amin'ny rano aho dia mahatsapa fa ny fitiavana sy ny fanasitranana no mameno ahy rehefa miditra ao amin'ny efitrano fandroana aho; Mahatsiaro tena ho toy ny hoe miezaka ny mikarakara ahy ny rano.
Rehefa tafapetraka sy nanosihosy, dia miadaladala sy lalina. Mangataha hafatra momba ny fanaintainanao. Ny loharanony dia matetika no fantatra fa misy avy hatrany, ary misy fampahalalana maromaro azo omena amin'ny fomba hanatsarana ny fanasitranana, toy ny mihira na mamerina mantra ("Om" dia miasa tsara). Nanana fanasitranana ara-panahy lalina aho tamin'ity fisaintsainana rano ity. Ohatra, nomena lesona aho mikasika ny antony mahatonga ny fifandraisana sasany eo amiko amin'ny fomba ataony sy ny fomba hanasitranana ny ampahany amiko izay mora vidy. Na dia tsy mahatsapa hafatra mandritra ny fandroana anao aza ianao, dia hahatsapa sy hahatsapa ny vokatra fanasitranana tsy ho ela sy mandritra ny andro. Fijoroana vavolombelona - amin'ny fomba fisainana - mandritra ny fandroana, noho izany dia afaka ny ho "tonga" sy handray. Avelao ianao hahatsiaro maimaimpoana ny mandeha miaraka amin'ny rano.
Aorian'ny 20 minitra dia misaotra ny rano izay monina ao anatinao. Ankoatra izany, fanehoana fisaorana ny rano ao amin'ny fantsona amin'ny fanasitranana, ary avy eo miala amin'ny sotro. Ny filazana hoe "misaotra" noho ny fanasitranana ny rano rehefa miditra sy mandritry ny fandroana dia mahasoa ihany koa, satria ny herin'ny fankasitrahana dia manasitrana amin'ny zony manokana ary hanampy amin'ny fitomboan'ny vibration ny rano ao anaty sotro sy ny vatanao.
Amin'ny maha-variana azy, misotroa ka hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 1 santôa salohim-bary Epsom miaraka amin'ny 5 isanjaton'ny dite natokana ho an'ny solika voajanahary (lavender sy mandarinine dia safidy tsara). Atongo ao anaty salope Epsom rehefa mameno ny toeram-pisotroana ianao; Ampio ny dite solon'ny solika aorian'ny fandroana ary alohan'ny hidiranao azy. Ho an'ny fanasanao voalohany fanasitranana voalohany, miezaha hiaina izany tsy misy fanampiana. Ho an'ny fandroana ho avy, azonao atao ny manandrana zava-pisotro, alika, zavamaniry, na felam-boninkazo ao anaty fandroana ary mozika malefaka na vato kristaly eo akaiky. Rehefa mianatra izay tsara indrindra aminao ianao, dia azonao atao ny manamboatra ny fandroana mba hikarakarana ny filànao ara-pihetseham-po sy fahasalamana.
Marks dia manamarika fa ny angovo rano ho an'ny fanasitranana anao dia mety ho hita ao anaty vatanao foana, fa indraindray dia mila fanampiana kely izay voampanga sy mavitrika ny rano. Raha mieritreritra ity andro iray ity aho, dia nanontany ny rano amin'ny vatako aho mba hanome fanasitranana, manaraka ny dingana maro toy ny rehefa manadio izany. Nandeha tany amin'ny fantsakana tao aho. Na dia tsy mahery toy ny rano fandroana aza aho dia nomena fanasitranana manan-danja foana.
Satish Kumar, tonian-dahatsoratry ny gazetiboky anglisy Resurgence: Foibe iraisam-pirenena momba ny fisainana ara-tontolo iainana sy ara-panahy , dia nanomboka ny valandresaka ho an'ny herinandro mikasika ny rano amin'ny alalan'ny fampisehoana antsika rehetra eny amoron'ny farihy. Natsipinay tao anaty farihy ny tananay ary avy eo dia nanosika ny rano ho any am-baravaranay. Nosokafanay ny tananay ary avelao handeha moramora ny rano. Tena zavatra matanjaka izany! Nidina ny masoandro, ary toy ny vatosoa teo amin'ny hazavana ny fiakaran'ny rano.
Ny feon'ilay rano nipetrahan'ny farihy dia rivo-doza mangatsiatsiaka. Nahatsiaro ho toy ny niala tamin'ny tantara Arthur Arthur momba an'i Avalon aho, ary nanaja ny masina tamin'ny fomba izay nahatsiarovako am-pahatsorana ela tany aloha. Ny fisaintsainana dia nanampy anay hahatsapa lalina lalina ao an-tsainay sy ny maha-zava-dehibe ny rano eo amin'ny fiainanao.
Sary famantarana rano
Ao Tarot, ny Kitapo nentim-paharazana nentim-paharazana no fitafy rano. Soso-kevitra, sambo, ary mariky ny saina sy ny saina tsy manam-paharoa sy ny atidoha. Ny rano dia mampiseho antsika ny sary, na ny mombamomba azy. Ny fihetseham-po, ny fihetseham-po ary ny fahalalana ara-tsaina dia samy aseho amin'ny rano ao amin'ny fomba amam-panao Tarot. Mirotsaka sy miova ny rano, ary mitondra ny zavatra manadio.
Ny batisa, ny rano masina ary ny fampiasana rano hafa dia ivon'ny fivavahana sy ny finoana ara-panahy. Ny rano no mpanadio. Manasa ny fahotantsika isika, manadio ny ratrantsika, ary mamoaka ny ranomasontsika. Araka ny fanamarihan'i Cait Johnson eto an-tany, ny rano, ny afo, ary ny rivotra, "ny fanahin'ny olombelona dia mahatakatra ny rano ho fiandohan'ny fiandohana." Nanohy nanamarika izy fa ny angano Hopi dia manomboka: "Tany am-piandohana dia tsy misy afa-tsy rano ny tany", ary ao amin'ny bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly, dia hahita ianao hoe "Tsy nisy endrika ny tany ary tsy nisy ny haizina. ny endriky ny rano lalina, ary ny Fanahin'Andriamanitra nidina teo ambonin 'ny rano. "
Mahaliana ny mandinika ny fahitana ny anjara toeran'ny rano an-tapitrisany amin'ny rafi-pinoana manerana izao tontolo izao, ary heverina ho lao ny hoe ahoana no nahatonga azy ho lasa fiarahamonina maoderina. Ny fiheverana iray momba ny rano izay mihodina am-potony (na farafaharatsiny ho ahy!) Dia mihamitombo ankehitriny.
Ny rafi-pinoana Amerikanina maro dia mahita ny masoandro ho ilay mpamorona eo no eo. Na izany aza, mino izy ireo fa misy hery lehibe ankoatra ny masoandro, hery izay "lehibe loatra ka tsy azo antsoina." Tsy manana anarana io hery io satria tsy azo eritreretina ny fahalehibeazany. Noho izany dia misafidy ny hivavaka amin'ny masoandro izy ireo. William E. Marks dia nanamarika tamiko tamin'ny alalan'ny e-mail, "Ny tena lehibe dia tsy azo lazaina hoe ny tsy fisian'ny rano tsy misy lanjany. Ny onjantsika dia tena onjam-pamokarana angovo, angom-pahefana izay manana loharano avy amin'ny ranon'izao tontolo izao izay mamorona sy manenika an'izao tontolo izao: raha ny marina, ny siansa vao haingana dia milaza amintsika fa ny kintana tahaka ny masoandro dia tsy afaka mamorona na velona raha tsy misy rano.
© 2005 Annie B. Bond. 9 (Oktobra 2005; $ 27.95US / $ 37.95CAN; 1-57954-811-3) Fahazoana alalana nomen'i Rodale, Inc., Emmaus, PA 18098.
Ny mpanoratra Annie B. Bond dia heverina ho feo manerantany momba ny fomba fiainana voajanahary. Ao amin'ny asany sy ny bokiny, izy dia manolotra torohevitra momba ny famoronana tokantrano izay mifanaraka amin'ny tany. Ny fahiratan-tsainy sy ny fahendreny dia vokatry ny tolona nataony tamin'ny vokatra vokatry ny lozam-pifamoivoizana simika roa izay nahafahany tsy afaka miasa eo amin'izao tontolo izao tahaka ny nahafantarany azy. Ny traikefa niainan'i Annie tamin'ny fahatsapan-tarehy simika dia nahatonga ny fiovana teo amin'ny roa tonta - tamin'ny fiainany manokana rehefa nianatra namorona tokantrano iray tsy misy poizina izy ary eo amin'ny fiainan'ireo izay tiany hamongorana ireo zavatra simika simenitra, vokatra tsy mitongilana, ary fandotoana ny rivotra iainana any an-tranony.
Ny diany mankany amin'ny fahasalamana dia nitarika ny bestseller voalohany, Clean & Green, ary avy eo ao amin'ny The Handbook Handbags Kitchen & Better Basics for the Home. Annie koa dia mpitsabo mpanampy matanjaka sy mpampiasa. Izy no mpamokatra mpanatanteraka ny Health2 Living2 Care2.com, fanitsiana ireo e-mailaka maimaim-poana enina izay alefa ho 1.8 tapitrisa ny mpamaky; ary izy dia manana ny tambajotra Ara-pahasalaman'i Annie ao Care2Connect, izay nandefasany bilaogy ihany koa. Annie dia mpanao famakafakana ho an'ny gazetin'ny Body + Soul. Tsidiho ny tranonkala ao anniebbond.com
Hafatra fampaherezana avy amin'ny arkanjely Ariela
Miara miasa amin'ny The Secret amin'ny Fifandraisana
Inona no dikan'ny hoe tsy hisy tany?
Inona no atao hoe Therapy Therapy?
Mudra Photo Gallery
Inona no anaran'ny anarako Guardian?
Mahatsiaro tena ve ianao?
Fomba hanadiovana ny Aura
Tena mahatsiaro tena
Mianara momba ny jiro jiro misy jiro sy ny fomba fiasan'izy ireo
Ny Fikarohana ny Bodisma Voalohany
Manomboha lesona amin'ny Taom-piotazana
Sary fohy momba an'i Elia, Mpaminany ao amin'ny Testamenta Taloha
Karazan-tsakafo iray manontolo sy tari-dalana ho an'ny mpividy
Ampahafantaro an'i Douglas-Fir
Ny fitaovana sy ny teknikan'i Jackson Pollock
Fitsaboana hafa momba ny Tinnitus
Ahoana ny fikajiana ny medaly, ny mediana ary ny fomba
Ny Loharanon-tseraseran'ny Ranomasimbe Indrindra ve ny Loharanon-karena?
Ahoana ny fomba amam-panao ny modely fanalefahana ny pinehurst
Ny famonoana an'i Martin Luther King Jr.
Nahoana no omena anao ny gazy?
Saina fisakafoanana fisakafoanana ho an'ny mpangataka
Ady lehibe faharoa: Battle of Makin
Andro ny Paska
Ny Vassa Retreat
Fake Blue or Green Blood Recipe
10 Rap Songs Ny Renim-pitiavana
Tetik'asan'ny High-Tech amin'ny fitantanana ny tondradrano
Natao ho an'ny Lalao ireo Wood Woods vaovao ireo
Constantinople: Renivohitry ny Fanjakana Romanina Atsinanana
Sarin'i Alejandro Aravena